Ronaldo oo Ganaax Culus La Dul Dhigay
Xiriirka kubadda cakta dalka Spain ayaa shan kulan oo ka mid ah horyaalka dalkaasi ka ganaaxay, xiddiga sare ee kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo, kadib marki dibadda looga saaray kulanki ay Axadi Real 3-1 uga badisay kooxda Barcelona, lukti koowaad ee finalka koobka Spanish Super Cup.
Afar kulan oo ka mid ah ciyaaraha horyaalka Spain ee La Liga ayuu Ronaldo u seegi doonaa akhlaaq xumo uu kula kacay garsoorihii dhex-dhexaadinayey ciyaarti Axadi, kadib marki uu Ronaldo dhabarka ka riixay garsooraha waxyar kadib marki loo taagay calaamadda casaanka ah.
Kulanka shanaad ee laga ganaaxay ayaa ah lugta labaad ee finalka koobka Super Cup-ka Spain ee ay kooxdiisa Real Madrid Arbacada la dheeli doonaan Barcelona.
Ronaldo oo ah 32 jir ayaa heysta muddo toban maalmood ah si uu uga qaato racfaan ciqaabta ay kusoo rogeen xiriirka kubadda cakta ee Spain.
Hadii laga diido racfaanka, ayaa Ronaldo wuxuu kusoo laaban doono ciyaaraha Spain 20-ka bisha September, balse wuxuu kooxdiisa u dheeli karaa tartanka koobka kooxaha horyaalka Yurub ee Champions League.